Janata Samachar - कहिलेसम्म जान्छ कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन ?
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा सरकार आलोपालो चलाउने सहमति पटक–पटक हुँदै आएका छन् । तर, एक वर्ष नबित्दै सत्तारुढ दलबीच खटपट देखिने इतिहास छ । केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन सहयोग गरेको कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर गठबन्धन संस्कारमा नयाँ अध्याय थपिदिए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
१३औँ महाधिवेशनमा कोइराला परिवारको विरासत तोड्न सफल भएपछि देउवा कांग्रेसको सत्तामा पुगेका थिए । उनी कांग्रेसको सभापति हुँदा केपी ओली माओवादी समर्थनमा प्रधानमन्त्री थिए । सभापति लगत्तै संसदीय दलका नेतासमेत देउवा चुनिए । चौथोपटक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलासा उनमा थियो । तर, सत्ता परिवर्तन सहज थिएन । माओवादीको साथ हुन्जेल ओली प्रधानमन्त्री भइरहन्थे । तर, देउवाले दुईपटकको प्रयासमा माओवादीलाई सत्ता सहयोगीबाट बहिर्गमन गराउँदै सत्ताकै नेतृत्वमा र्पुयाइदिए । तर, झन्डै ९ महिनापछि सत्ता आफ्नै हातमा ल्याउन देउवा सफल भए । फेरि पनि एमाले र माओवादीलाई मिल्न नदिने दाउमा देउवा छन् ।
अर्को्तिर माओवादीको अवस्था अहिलेजस्तै तेस्रो नै हुने सम्भावना धेरै छ । यसैले अहिलेकै गठबन्धन दलहरू फेरि पनि मिल्ने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, यो चुनावी नतिजापछि मात्रै टुंगो लाग्ने विषय हो । ‘हामी शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री दल हौँ । त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनसम्म मात्र होइन त्यसपछि पनि मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ देउवानिकट नेता डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारसँगै संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्र संस्थागत गर्न हामी मिल्नैपर्छ ।’ अब स्थानीय तहको तेस्रो चरण, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा गराउँदै छन् ।
२०७४ भदौ २८ गते ०६:५१ मा प्रकाशित